Kamerooyin waxqabad oo jaban - La cusboonaysiiyay Janaayo 2022 | Androidsis
Jose Alfocea | | Qalabka kale
Waqtiyadan dambe, kaamirooyinka waxqabadka waxay noqdeen kuwa aad moodada, mana aha oo kaliya kuwa adeegsadayaasha xiisaha badan, laakiin sidoo kale dad badan oo raba qabsan daqiiqado badan oo xiiso leh nolosha taas oo, caadi ahaan, aadan ku gaari karin taleefan casri ah, kamarad fal-celin ah ama qalab kale oo gacanta lagu qaato.
Haddii aad halkan timid, waxay u badan tahay inay taasi tahay sababta oo ah waxaad sidoo kale ka fekereysaa inaad hesho kamaraddaada ugu horreysa ee waxqabadka ama, laga yaabee, waxaad rabto waa inaad cusbooneysiiso kamaraddaadii hore qaab aad u badan oo shaqeynaya oo jaban. Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii aad xiiseyneyso inaad soo iibsato kamarad qaab GoPro ah, oo tayo wanaagsan leh, adkaysi leh, laakiin aanad doonayn inaad jeebbadaada ka faaruqiso isku dayga, waxaan kugula talinayaa inaad sii wadato akhrinta qoraalkan oo aan wax badan uga hadli doonno kuwan qalabka iyo sidoo kale, waxaan ku siin doonaa a xulashada kaamirooyinka waxqabadka jaban si adiguba u qori kartid dhammaan waxyaabaha kugu soo kordhay.
1 Kaamirooyinka waxqabadka jaban
1.1 Kaamirada Xiaomi Yi Action
1.2 Blackview geesi 1
2 Hagaya inaad si fiican u doorto kamarad wax qabad oo jaban
2.1 Astaamaha muhiimka ah
Kaamirooyinka waxqabadka jaban
Kaamirada Xiaomi Yi Action
Haddii aan Shiinaha ka eegno kaamirooyinka wax qabadka ee jaban, waa wax aan macquul aheyn in aan xusno shirkadda weyn ee Xiaomi iyo tan Kaamirada Yi.
La Yi Action Camera Waxay leedahay shaabadda tayada ee Xiaomi, shirkad si fiican u yaqaan taageere kasta oo tiknoolaji ah. Waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican, oo leh a tayada sawirka wanaagsan (Sony Exmor R IMX206 iyo ZEISS Tessar Wide Angle 155 ° sensor - f / 2.8) a ismaamul hufan (Batariga 1010 Mah), aad iyo aad fududahay in la isticmaalo duubista fiidiyowga iyo marka sawir qaadista labadaba, iyo a xasilinta muuqaalka sidoo kale waa mid aad u muuqda. Iyo haddii aan ku darno tan in sicirkeedu inta badan ku dhow yahay 70-85 euro, xitaa ka sii fiican. Sidoo kale, waa inaan qiraa inaan jeclahay naqshadeeda.
Blackview geesi 1
Suurtagal kale waa Blackview Hero 1 (maya, maahan GoPro xitaa haddii ay kula muuqato xitaa magac ahaan). Muhiimadda kamaradan ficilku waa inay leedahay a 16 megapixel Sony dareeraha oo leh f / 2,8 furitaan u oggolaanaya duubista fiidiyowga illaa xalka 2K iyo 60fps. Waxay ku dembaabtaa xasilinta muuqaalka, wali waa la aqbali karaa, iyo iswaafajinta casriga ah oo mararka qaarkood si gaabis ah u gaabiya. Iyo sida aad u 1050 mAh baytariga, waxay na siin doontaa ismaamul aad ula mid ah Xiaomi's Yi Action.
La SOOCOO S60 Waa kamarad waxqabad leh naqshad isboorti oo runti ah, in kasta oo laga yaabo inay badnaato. Mid ku tiri 10 dareejiye megapixel kaas oo aad ku duubi karto fiidiyowyo Xallinta 1080 p iyo 30 fps oo leh fure f / 2.8 iyo muuqaal muuqaal cadaalad ah oo la aqbali karo. Batarigiisu wuxuu lamid yahay Xiaomi's Yi Action Camera, 1050 mAh iyo ismaamulkeeda wuxuu lamid yahay tan iyo moodooyinka kale ee kujira qeybtiisa.
Muujintu waa taas wuxuu la yimaadaa kontoroolka fog leh suunka la isku hagaajin karo sida haddii ay tahay saacad si aadan u lumin, iyada ayaan ku xakameyn karnaa duubitaankeena, xitaa adeegsiga afar geesood maxaa ka mid ah.
La Wax alaab ah lama helin. Waa kaamiro ficil Shiine ah oo kudhow boqol boqol oo euros qiimaheeda, inkasta oo aysan ahayn ikhtiyaarka ugufiican liiskan, waxay noqon kartaa haddii aad ku qabato iib ahaan oo aadan u adeegsan doonin si xoog leh, gaar ahaan maxaa yeelay Way ku adag tahay isaga inuu dhaqaajiyo feylasha waaweyn, maxaa yeelay makarafoonkiisu si sax ah ugama wanaagsana. Weli, waxay bixisaa a tayada sawirka aad loo aqbali karo oo leh dareeraha 12 MP, f / 2.8 aperture iyo 1920 x 1080 xallinta 30 fps. Aah! ay baytariga waa 900 Mah, waliba xoogaa ka liita kuwii hore. Dhinaca kale, waxay leedahay a xasilinta sawirka waa wax la aqbali karo in ay saxdo oo sifiican u dhaqdhaqaaqyada aan loo baahnayn.
Ikhtiyaar kale oo aan kugula talin karno waa tan aan la aqoon Eken H9, aan la garanayn laakiin leh tayo muuqaal aad u wanaagsan. Iyada oo leh 12 megapixel sensor waa awood u leh duubista fiidiyowyada 4K FULL HD 30 fps, iyo sidoo kale 1080p iyo 60fps, iyo 720p iyo 120fps. Xasiliyaha muuqaalka ee shaqadiisa si aad u wanaagsan u qabta, iyo ismaamul hufan, oo la mid ah kamaradaha intiisa kale ee aan aragnay, in kasta oo ay faa'iido tahay in lala yimaado laba baytariyada 1080 Mah. Oo intaas oo dhan iyo faa'iidooyin kale oo badanba, qiimahiisu waa dhow yahay 80 euros.
Tanna waxaan ku dhammeyney soo jeedintan kaamirooyinka waxqabadka Shiinaha ee jaban, beddelka wanaagsan ee GoPro oo ah fikrad ah, oo aan shaki ku jirin, inay qancin karto rabitaankaaga inaad duubto kun iyo hal xiisaha. Marka la eego guud ahaan, waxaad horay u aragtay in dhammaantood ay aad isugu egyihiin. Qaarkood waxay si aad ah uga muuqdaan dhinacyada qaarkood, kuwa kalena waxay ka muujinayaan kuwa kale, laakiin dhammaan moodooyinka hore waxay bixiyaan qiimo isku mid ah oo tayo leh, in kastoo laga yaabo in kamaradan ugu dambeysay, Eken H9R, ay ka muuqato inta kale.
Midkee ayaad ugu jeceshahay? Ma taqaan xulasho kale? Ma isticmaashaa kaamiro ficil raqiis ah oo aad ku faraxsan tahay oo aad rabto inaad wax ka ogaato?
Hagaya inaad si fiican u doorto kamarad wax qabad oo jaban
Sanadihii la soo dhaafay oo dhan, kamaradaha waxqabadka ayaa noqday kuwo aad moodada Dadka dhexdiisa, isbeddel ku xirnaa danta bulshada ee fayoobaanta, isboortiga, caafimaadka, waxqabadyada bannaanka… Dhammaanba, badeecada noocan ah wax yar baa looga isticmaali karaa guriga. Dhinaca kale, caan-bixintan weyn, si la mid ah kuwa ku dhaca noocyada kale ee aaladaha elektarooniga ah, waxay doorbiday hoos u dhac guud oo la dareemi karo oo qiimo leh, hab ah in xilligan ay suurtagal tahay iibso kamarad waxqabad tayo sare leh oo jaban, qiimaha aad uga hooseeya kuwa moodooyinka ugu horreeya.
Malaha mid ka mid ah kamaradaha waxqabadka ugu caansan ee la yaqaan ayaa ah GoProAad ayey u badantahay in astaanta ay ku dhowdahay inay noqoto mid la jaanqaaday waxaanan inta badan ka hadalnaa "kamaradaha GoPro" ama ku saabsan iibsashada "GoPro" marka runtii ma dooneyno inaan tixraacno sumaddan kamaradaha wax qabadka gaar ahaan. Laakiin runtu waa taas waxaa jira nolol ka baxsan GoPro.
Inteena ugu badan ayaan u aqaannaa kamaradaha noocan ah inay yihiin kuwa sidaas ah waxaa loo isticmaalaa in lagu duubo fiidiyowyadaas dhaqdhaqaaqa in aan ka aragno YouTube-ka iyo baraha bulshada. Waxaan ka hadleynaa fiidiyowyo ay halyeeyaasheedu ku quusayaan biyo cadcad oo wadaagaya meel qurux badan oo leh dhuxul qurux badan iyo kalluun, ama ka boodaya buundo boqolaal mitir ah oo dheer, fuula buur, baraf baraf, sahamin god ama ku lugeynaya sabuuradda. Waxaas oo dhan iyo inbadan oo ka badan ayaa lagu qabsan karaa iyadoo kaamirooyinka kale ee waxqabadka laga heli karo suuqa qiimo aad u jaban
Sida caadiga, kamaradaha waxqabadka ugu jaban ayaa nooga yimaada Shiinaha. "Buugga" wuxuu bixiyaa a noocyo kala duwan oo qiimo leh, oo leh astaamo kala duwan iyo dhammaan noocyada qaababka duubista iyo shaqooyinka, sidaa darteed mararka qaarkood way kugu adkaan doontaa inaad doorato, maadaama dalabku aad iyo aad u badan yahay. Si kastaba ha noqotee, waa inaad had iyo jeer maskaxda ku haysaa haddii aad u isticmaali doontid iyo waxa.
Markaad dooranayso kamarad ficil ah, sida aan sameyno marka aan iibsaneyno taleefanka casriga ah ama kaniiniga, waa lama huraan inay buuxiso rajooyinkayaga iyo baahiyaheena. Waxaan iibsan karnaa kamaradda waxqabadka ugu fiican adduunka, laakiin haddii waxa kaliya ee aan sameyn doonno ay tahay sawir muuqaal ah, taallooyin ama sawirro, waxaan badbaadin karnaa lacag. Sidaa darteed, marka hore ka fikir xaaladaha aad isticmaali doontid oo halkaa ka dhaca, go'aanso. Xusuusnow taas kamaradda waxqabadka ugu fiican ee aad dooran karto waxay ku xirnaan doontaa sida aad u isticmaasho, adigoon ilaawin inaadan qabsan karin oo keliya daqiiqado laxiriira tacaburka iyo cayaaraha xad dhaafka ah, laakiin dhammaan noocyada sawirrada dhaqaaqa, tusaale ahaan, safarka fasaxaaga soo socda. Marka yeynaan ku koobnaan inaan ka boodno buundada sidoo kale?
Taasi waxay tiri, maxaan si gaar ah ugu fiirsanaa markay tahay inaan kala doorano mugga wanaagsan ee kamaradaha waxqabadka?
Xallinta. Sida iska cad, haddii aan iibsanno kamarad si aan u duubno, waxaan dooneynaa in muuqaalka uu bixiyo tayada ugu fiican ee suurtogalka ah, si kastaba ha noqotee, sida ka dhacda kaamirooyinka casriga ah, xusuusnow in tiro badan oo pixels ah oo ku jira dareeraha aysan aheyn inay la mid noqoto qaraarka sare . Qaab wanaagsan oo loo hubiyo tayada muuqaalka ayaa ah in la daawado fiidiyowyo lagu duubay nooca aan baareyno.
Madax-bannaanida. Asal ahaan, kamaradeena waxqabadka waxaa lagu isticmaali doonaa banaanka, meelaha ka baxsan, sidaas darteed waa inaan fiiro gaar ah u leenahay awoodda batteriga. Ha iloobin in muddada ay kuxirantahay ay kuxirantahay dhowr arrimood, tusaale ahaan, duubitaanka buuxa ee HD wuxuu cunaa in kabadan inta lagu sameeyo HD. Ah, sidoo kale waa ku habboon tahay in lagu sameeyo iyada oo WiFi la damiyay, sabab la mid ah.
Waafaqid siyaada ah, lagama maarmaan u ah in la siiyo kamaradeena waxqabadka adeegsiyo badan iyo in badan oo laga helo. Shirkado badan ayaa wax ka "soo guuriyeen" nidaamka boolida iyo kabaha GoPro, markaa xaaladaha badankood waxaad ka heli doontaa wax la mid ah. Fiiro gaar ah u yeelo tan si aad u awoodo inaad adeegsato dhammaan noocyada taageerooyinka, tiirarka, qolofka biyuhu ay xiraan iyo wax kaloo badan.
Xasilinta muuqaalka. Maaddaama kaamirooyinka waxqabadka loogu talagalay duubista dhaqdhaqaaqa, tani waa dhinac kale oo muhiim ah oo ay tahay inaanan dayacin, maaddaama aanan dooneynin fiidiyowyadeennu inay aad u kacaan oo aan ku raaxeysanno daawasho siman. Waxa ugu fiican ee lagu hubin karo dhinacan, mar kale, waa inaad daawato fiidiyowyo lagu duubay qaabka aad tixgelinayso.
Audio. Waa dhinac aad loo ilaaway, laakiin muhiimad weyn leh. Kaamirooyinka waxqabadka qaarkood ayaa si dhib yar u qaadaya, tusaale ahaan, buuqa dabaysha, halka kuwa kale, waxay u dhowdahay waxa kaliya ee aad maqasho.
Iyo hadda oo aad wax badan ka ogaatid noocan ah kamaradaha GoPro iyo, wixii ka sarreeya, dhinacyada ugu muhiimsan ee ay tahay inaad fiiriso ka hor intaadan sii deynin koollada, halkan waxaan kuugu soo bandhigaynaa wax badan kamaradaha waxqabadka in kasta oo ay horeba uga qaalisan yihiin beddelaadaha aan ku aragnay qoraalkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Kaamirooyinka waxqabadka jaban (beddelaadaha Shiinaha)
Liis wanaagsan !! In kasta oo aan u xiisay magacyada sida mgcool ama elephone oo leh moodel xiisa leh